देवकोटा र उनको अनुवाद | विचार सङ्कलन
देवकोटा गतिशील कवि भएकाले र समयभन्दा द्रूत गतिमा दौडेकाले उनले गतिरोधको सामना गर्नुपरेको इतिहास सबैको सामु छर्लङ्ग छ । उनी माघको ठण्डीमा ताराको राप तापेर बस्छन्, दुनियाँ उनलाई तरङ्गी भन्छन् ! उनी एउटी सुन्दरीको केशमा तुषाराको छिर्का परेको देखेर रुन्छन्, मानिसहरू उनलाई छटाएको भन्छन् ! उनी वसन्तको पहिलो कोकिल नाचेको देख्छन्, जगत् उनलाई बहुला भन्छन् ! उनी एक दिन तुफानसँग गीत गाउन थाल्छन्, बज्रस्वाँठहरू उनलाई राँची पठाउँछन् ! वास्तवमा, वातुल को हो <
विलक्षण प्रतिभा, प्रश्नवाचक प्रखरता, गतिशील प्रगतिशीलता र मननीय महान्ताकै कारण महाकविजस्तो अत्यन्तै आदरणीय पदबाट उनी विभूषित भएका हुनुपर्छ । (महाकाव्य लेख्ने सबै कविहरू महाकवि हुँदैनन् भन्ने कुरो ज्ञातव्य छ ।) यस्ता गतिशील महाकविको शारीरिक स्वरुप कस्तो थियो होला भन्ने जिज्ञासाको जवाफमा वरिष्ट समालोचक कृष्णचन्द्रसिंह प्रधानको आँखामा देवकोटाको साक्षात स्वरुप यस्तो देखिन्छ M ‘फराकिलो ललाट, भव्य अग्लो जीउ, दोहोरो छाती, लठ्ठिएका आँखा, असरल्ल लवेदासुरुवाल, क्यै खोजिरहेजस्तो सङ्लो सरल, निर्दोष अनुहारका शान्त गम्भीर देवकोटामा भोलिको सिङ्गो साहित्य देखेजस्तो अभिभूत हुन्छ ।’
उनै देवकोटाको शतवाषर््िाकीको उपलक्ष्यमा लेखिएको यो लघु–लेखको उद्देश्य महाकविको सिङ्गो साहित्यिक जीवनको समालोचनात्मक विश्लेषण गर्नु नभएर उनको अनुवादक व्यक्तित्वको मोटामोटी परिचय दिने जमर्को मात्र हो, त्यसमा पनि खासगरी उनले अत्यन्तै महŒवकासाथ अनुवाद गरेका विलियम सेक्सपियरको विश्वविख्यात नाटक म्याक्बेथ (वि.सं. २०१४) र उनीद्वारा अनूदित पश्चिमी जगतका (सोह्रौँ, सत्रौँ र अठारौँ शताब्दीकां) प्रसिद्ध १३ निबन्धकारका निबन्धको अनुवाद’bout छोटकरी टिप्प्णी गर्नु हो । प्रसङ्गवश भाषा र भाषान्तरको सन्दर्भ गाँसिने छ त्यहाँ र देवकोटा’bout विचारविमर्श गरिने छ ।
वहुप्रतिभावान् देवकोटाले नेपाली साहित्यभण्डारमा थुप्रै काव्य, खण्डकाव्य र महाकाव्यमात्र सिर्जना गरेनन्, बरु अनेक गहन निबन्ध र प्रबन्धहरू पनि लेखेर गएका छन् । उनले झन्डै पाँच दर्जन साहित्यिक ग्रन्थहरू सिर्जना गरेर गएका छन् । हामी उनलाई हृदयदेखि नै आदर गर्छौँ । हामी उनलाई मनैदेखि कदर गर्छौँ र उनको स्मृतिगीत गुनगुनाउछौँ । नेपाल र नेपालीका अत्यन्तै गौरवशाली गुरु हुन् देवकोटा । उनले हामीलाई धेरै कुरा सिकाएका छन् तर हामीले थोरैमात्र सिकेका छौ । उनले हामीलाई धेरै कुरा देखाएका छन्, तर हामीले थोरै मात्र देखेका छौँ । उनले हामीलाई धेरै कुरा भनेका छन्, तर हामीले थोरै मात्र सुनेका (बुझेका) छौँ । यस अर्थमा हामी अलिकता सुस्त र कृतघ्न पनि हौँ भन्दा फरक नपर्ला कि ? यो सत्य हो— हामीले उनको गुन आजसम्म तिर्न सकेका छैनौँ र त्यसप्रति कुनै पश्चाताप पनि छैन । हामीले उनको उचित कदरसम्म पनि गर्न सकेका छैनौँ । हामीले उनको मानवीय मूल्य र मान्यताको मुल्याङ्कन गर्न सकेका छैनौँ, साहित्यिक मुल्याङ्कनको के कुरा ! राज्यदेखि लिएर यो देसका साहित्यिक समाजले समेत देवकोटाको पाखण्डपूर्ण स्तुती मात्र गाउँदै आएका पो हुन् कि भन्ने आशङ्का पनि गर्न सकिन्छ । ’cause, यथार्थ यस्तै छ— डरलाग्दो छ सत्य ! सत्यलाई चिनेर पनि त्यसको पक्षमा ठोस कदम चाल्न नसक्नु सबभन्दा भयावह अवस्था हो ! आजसम्म महाकविको नाममा एउटा सङ्ग्रहालय पनि स्थापना नगरिनु साहित्यप्रतिको घोर उपेक्षा होइन र ? यस कार्यको निम्ति दिवंगत देवकोटाले चिहानबाट ब्युँतेर हाम्रा लोकतन्त्रवादी नेताहरूलाई बिन्तीपत्र पो चढाउनुपथ्र्र्यो कि ? साहित्यको महत्ताप्रति कति डरलाग्दो उपेक्षा ! साहित्यलाई उपेक्षा गरेर मुलुकको विकास गर्छु भन्नु मध्यरातमा बत्ती निभाएर उज्यालो खोज्नुजस्तै हो । यो कुरो हाम्रा राजनेताहरूले पनि बुझिदिए ! साँच्चै भन्नुपर्दा, हामी माल पाएर चाल नपाउनेहरूको जमात पो हौँ क्यार ! माल पाएर चाल नपाउनेले ठूलै क्षती व्योहोर्नुपर्छ भनिन्छ । हामीले क्षती पनि व्योहोरेका छौँ, तर अझै चेतेका छैनौँ । हामीले आजसम्म अरुलाई गिज्याउन मात्र सिकेका छौँ, तर आपूmलाई खिस्याउन अझै सिकेका छैनौँ । आफैँलाई गिज्याउन नसिकेसम्म मान्छे वास्तवमा सुखी हुन सक्तैन भनिन्छ ! सूक्ति ढाँट्तैन !
प्राथमिक विद्यालयदेखि, विश्वविद्यालयसम्म हामी देवकोटा पढ्छौँ र पढाउँछौँ । मेचीदेखि महाकालीसम्म, हिमालदेखि तराईसम्म हामी बर्सेनि देवकोटाको जन्मजयन्ती मनाउँछौँ । हामी हरेक वर्ष उनको सालिक र फोटालाई गोदाबरी पूmलले सजाउछौँ । हुनसक्छ— हामी महाकविप्रति भक्तिभाव देखाउँदै अनेक फँुदा गाँसेर भाषण पनि छाँट्र्छौँ र सयौँ–हजारौँ जोर हत्केलाहरूले कर्तलध्वनि पनि बजाउँछौँ । हामीले देवकोटाको नाममा अनेक पुरस्कार ग्रहण र वितरण पनि गर्दै आएका छौँैँ । हामीले देवकोटा’bout थुप्रै लेख लेखेर विविध पत्रपत्रिका र स्मारिकामा छपाएका पनि छौँ । सायद, देवकोटा’bout आजसम्म लेखिएका भएभरका लेखहरूको संख्या जोड्ने हो भने असंख्य भैसके होलान्, तर देवकोटा’bout गहन खोज र अनुसन्धान कति भएको छ त ? के यो महŒवपूर्ण प्रश्न होइन र ? यस’bout सम्बन्धित निकायबाट खोजी र मूल्याङ्कन कति भएको छ, त्यो मजस्तालाई थाहा छैन । वास्तवमा, गहिरिएर खोज्दै जाँदा देवकोटाको समग्र परिचय दिने गतिलो ग्रन्थ पाउन अझै पनि मुश्किल छजस्तो लाग्छ । यदि कुनै सुयोग्य प्राज्ञले महाकवि देवकोटा’bout पूर्ण साहित्यिक परिचय समेटिएको गहन लेख तयार पारी इन्कार्टा वा ब्रिटानिका वा क्याम्ब्रिजजस्ता कुनै इन्साइक्लोपेडियामा विधिपूर्वक पेस गर्न सके लेखकको नाम पनि रहने थियो र हाम्रा महाकवि देवकोटा पनि विश्वकोशमा स्थापित हुने थिए ! वास्तवमा, देवकोटा विश्वकोशमा स्थापित हुनलायक व्यक्तित्व हुन् । देवकोटा नेपाली साहित्यआकाशका अप्रतिम प्रतिभा हुन् भन्ने कुरोमा दुई मत छैन । निरङ्कुश सामन्ती राणाशासन र अर्धसामन्ती शाहीशासनकालीन मरुद्यान थिए देवकोटा, जनबिरोधी जर्जर मरुभूमिबीच सुन्दर मनोहर गोदाबरीपूmल बनी ढकमक्क फुलेका थिए । देवकोटाले ‘म्याक्बेथ’ अनुवाद त्यति बेला गरे, जतिखेर नेपालमा १०४ बर्से निरङ्कुश जहानिया राणाशासन ढलेको सात वर्षमात्र भएको थियो र त्यसको ठाउँमा अर्को निरङ्कुश शाहीशासन स्थापित भएको भर्खरै छ–सात वर्ष पुगेको थियो । ‘कोतपर्व’ र ‘भण्डारखालपर्व’ भोगेका स्रस्टाले ‘म्याक्बेथ’ अनुवाद गर्नुको महŒव छुट्टै हुन्छ ।
देवकोटा’bout कलम चलाउँदा:
देवकोटाजस्ता होनहार साहित्यिक धरोहरद्वारा गरिएका अनुवादकार्य’bout कलम चलाउने जमर्को गर्दा एउटा सामान्य लेखकलाई धक लाग्नु अस्वाभाविक होइनजस्तो लाग्छ । त्यसमाथि देवकोटाद्वारा अनूदित साहित्यिक कृति’bout लेखिएका गहन सन्दर्भपुस्तकहरूको हामीकहाँ अभाव पनि त छ नि ! एक–दुई वटा सामान्य सामग्रीको भरमा देवकोटीय अनुवाद’bout सिङ्गो लेख लेख्ने आँट गर्नु धृष्टता पो हुने हो कि भन्ने सोचले जित्दाजित्दैै पनि केही मित्रहरूले हौस्याएको भरमा यो लेख जसोतसो लेख्ने जमर्कोसम्म गरेको हुँ । कलम चलाएको केही मिनेटभित्रै सन्दर्भसामग्रीको अभाव खट्किनु थियो, खट्किहाल्यो । यो मनमा लाग्यो— यदि साहित्य, कला र सूचनाप्रविधिमा हाम्रो मुलुक विकसित हुन्थ्यो भने महाकवि देवकोटा कम्प्युटरको की–बोर्ड र पाठकका औँलाहरूबीचको स्पर्शमा जीवित भेटिने थिए होलान् ! अज्ञात शक्तिले मेरो मस्तकमा ढकढकायो—“बबुरो ! तिमीहरू अज्ञानतामा अगाडि छौँ, ज्ञान र प्रविधिमा पछाडि छौ ! तिमीहरू धाक र धक्कुमा धनी छौ, गहकिलो गराइमा गरिब छौ ! उत्निखेर बिउ रोपेर उत्निखेर बाली भिœयाउन सकिन्न भन्ने कुरो तिमीहरूले हिजो–अस्ति नै बुझ्नुपथ्र्यो ! आज बुझ्दा पनि हुन्थ्यो !”
देवकोटाद्वारा अनूदित स्रस्टा विलियम सेक्सपियर मानव इतिहासकै उत्कृष्ट नाटककार एवम् अब्बल अङ्ग्रेज कविको रुपमा सुपरिचित छन् । उनको नाटक, चरित्रपात्र, कथावस्तु र भाषा’bout संसारका विद्वान्हरूले हजारौँ पुस्तक र लेखहरू लेखिसकेका छन् र प्रकाशित गराइसकेका छन् । उनका नाटकहरू संसारमै सबभन्दा धेरैपटक मञ्चन गरिएका हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ र उनी संसारकै सबभन्दा सान्दर्भिक साहित्यिक व्यक्तित्व हुन् भन्ने पनि बुझिन्छ । उनको नाटकमा रहेका दार्शनिक गहिराइ, भाषाको गहनता र सुन्दरता अनि आश्चर्यजनक चरित्रपात्रहरूको विविधता र व्यापक पाठकहरूबीच लोकप्रियताको कारण उनका नाटकहरू विश्वभरि नै सदाबहार बनेका हुन् । सेक्सपियरले ग्रिसेली महापण्डित अरस्तुको शक्तिशाली नाट््यसूत्रलाई समेत पन्छाएर मौलिकपनको विकास गरे । मान्छेमा आइपर्ने दुःख र समस्याहरू दैवी कारणले आइलाग्छन् भन्ने प्राचीन ग्रिसेली नाटकका परम्परागत मान्यतालाई सेक्सपियरले परिवर्तन गरी मान्छेले भोग्नुपर्ने दुःख र कष्ट मानवीय चरित्र र व्यवहारकै कारण उत्पन्न हुन्छन् भन्ने कुरो देखाए । म्याक्बेथ यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । निश्चय पनि यो सोच पुनर्जागरणकालको उपज हुनुपर्छ । सेक्सपियरका यस्ता मौलिक विशेषता’bout अनुवादक देवकोटा सचेत भएको पाइन्छ, तर देवकोटाको अध्ययनअनुसार विश्वप्रसिद्ध रसियाली लेखक लियो तोल्सतोयले सेक्सपियरको धेरै अवगुणहरू दर्शाएर उनलाई पहिलो दर्जाको नाटककारमा राख्न अनुचित ठानेका थिए भनिन्छ र सुप्रसिद्ध अङ्ग्रेज नाटककार बर्नाड शाले सेक्सपियरको चिहानमा रहेको हड्डी बाहिर निकालेर एकपल्ट झट्कार्ने चेष्टा समेत गरेका थिए रे । यस्ता सूक्ष्म टिप्पणीहरूले देवकोटाको गहिरो अध्ययनको पुष्टि गर्दछ ।
सेक्सपियरीय सन्दर्भमा बोल्दा वा लेख्दा सेक्सपियरकालीन भाषा’bout धेरथोर चर्चा हुनु बेसै हुने छ । आजभन्दा चार सय वर्षपूर्वको सेक्सपियरकालीन अङ्ग्रेजी आजको आधुनिक अङ्ग्रेजीभन्दा निकै फरक थियो, लचकदार थियो । उसबखतको अङ्ग्रेजी भाषा विकसित भैसकेको थिएन, हिज्जे र व्याकरण राम्रो व्यवस्थित भैसकेका थिएनन् । अङ्ग्रेज विद्वान्हरूले व्याकरणका नियमहरू भर्खरभर्खर बनाउन सुरु गरेको अवस्था थियो त्यो । पश्चिमी सभ्यता र संस्कृतिमा बौद्धिक र कलात्मक मानिएको ल्याटिन भाषालाई भर्खरै मात्र अङ्ग्रेजी भाषाले विस्थापित गर्दै महत्वपूर्ण साहित्यिक भाषाको रुपमा स्थापित हुन लागेको थियो । त्यस बखतको अङ्ग्रेजीमा व्याकरणका नियमहरू स्वतन्त्र भएकाले सेक्सपियरले आफ्नो अनुकुल र ढाँचामा शब्द तथा वाक्यसंरचनालाई व्यापक उपयोग गरेका थुप्रै उदाहरणहरू पाइन्छन् । कतिसम्म भने नामपदलाई विशेषण वा क्रियापदको रुपमा समेत सन्दर्भ हेरी उनले प्रयोग गरेका भेटिन्छन्, अनि विशेषणलाई क्रियाविशेणको रुपमा र सर्वनामलाई संज्ञाको रुपमा पनि उपयोग गरेका पाइन्छन् ! सायद, यस्ता बृहत् स्वतन्त्रताले सेक्सपियरको भाषालाई असाधारण तुल्याए पनि सहज र ग्रहणयोग्य भने बनाएको देखिन्छ, जसको कारण उनको अभिव्यक्ति एकदम व्यापक र सशक्त बनेको थियो । सेक्सपियरको साहित्यिक सफलता अङ्गे्रजी भाषाको द्रूत र व्यापक विस्तारको कारण नै हुन गएको हो भनिन्छ । उसबखत नयाँ र आगन्तुक शब्दहरू अपूर्व गतिमा अङ्ग्रेजी भाषामा वैरिएका थिए । भनिन्छ— सेक्सपियरका नाटक र काव्यहरूमा मात्र लगभग तेईसहजार शब्दावली प्रयोग भएका छन् र तीमध्ये कैयौँ नविन (virgin) शब्दहरू पहिलोपल्ट उनका कृतिमा प्रयोग गरिएका थिए । त्यो युरोपेली पुनर्जागरणकालमा कतिपय आगन्तुक शब्दावलीहरूले, विशेषतः ल्याटिन र अन्य युरोपेली भाषाहरूले अङ्ग्रेजी भाषालाई सुसम्पन्न तुल्याएको कुरामा भाषाविद्हरूको एकमत छ । सेक्सपियरले ती नविन स्रोतहरूको भरमार उपयोग गरेका थिए । सेक्सपियरले उपयोग गरेका भाषामा बाइबलका प्रार्थना, उपदेश र उखानरुपी अभिव्यक्तिहरूको प्रभावसमेत प्रचुर मात्रामा पाइन्छन् । भनिन्छ— आजका आधुनिक पाठकहरूले सेक्सपियरलाई राम्ररी बुझ्न नोट नै तयार पार्नुपर्छ ! देवकोटाले सेक्सपियरीय भाषालाई राम्ररी खारेर पस्केका छन् ।
तर नाटकमा सेक्सपियरीय कवितात्मक एकालाप बुझ्न भने औधी कठिन हुने उनका दर्शक र पाठकहरूको अनुभव छ, ’cause उनले कवितामा कल्पना, जटिल उत्तेजना र मूल पात्रको विचारलाई गुन्द्रुकझैँ खाँदेर राखेका हुन्छन् । यदि हामी जटिल कविता मनपराउँदैनौँ भने सायद, सेक्सपियरलाई मनपराउँदैनौँ !
मेरो बुझाइमा म्याक्बेथ नाटकको सर्वाधिक महŒवपूर्ण नाट््यसंवाद हुनसक्छ यो । प्रस्तुत उधृतांशको रङ्गमञ्चीय परिवेशलाई नियालेर हेर्दा मानिसद्वारा गरिने व्यर्थका नकारात्मक ईष्र्या, लोभ र द्वेष’bout म्याक्बेथ सोचमग्न भइरहेको हुन्छ । म्याक्बेथ र लेडी–म्याक्बेथको राज्यसत्ता हत्याउने षडयन्त्रपूर्ण योजना स्खलित हुँदै गएको शृङ्खलाबद्ध दृश्य एकपछि अर्को देखापर्दै गइरहेको हुन्छ । यसैबीच लेडी–म्याक्बेथ मरेको सम्चार सुन्नेबित्तिकै म्याक्बेथ यो सारगर्भित संवाद प्रकट गर्दछ । यस दृश्य–काव्यले मानवजीवनलाई रङ्गमञ्चसँग तुलना गर्दै भन्छ : ‘जीवन चल्दो छायाँ हो, रङ्गमञ्चमा त्यो घमण्डले हिंड्छ… षडयन्त्र र अहङ्कार मान्छेको मूर्खतासिवाय केही रहेनछ, व्यर्थ रहेछ त्यो । अन्ततः मान्छेले अरुलाई धोखा दिन सक्तैन रहेछ ।’ म्याक्बेथको ‘सेल्फ–रियलाइजेसन’ व्यक्त भएको छ यहाँ, अनि लेडी–म्याक्बेथको चरित्र टड्कारो रुपमा इङ्गित भएको, गरिएको देखिन्छ । सेल्फ–रियलाइजेसन सामाजिक रुपान्तरणको एउटा महŒवपूर्ण कडी हो ।
आपूmले गरेको काम’bout राम्रो जानकारी राख्नु असल स्रस्टाको बौद्धिक एवम् नैतिक दायित्व हो । अनुवादक देवकोटाले नाटककार विलियम सेक्सपियर र उनको नाटक म्याक्वेथ’bout आपूmमा गहिरो ज्ञान थियो भन्ने कुरो राम्ररी पुष्टि गरेका छन् । गहिरिएर हेर्दा देवकोटा म्याकबेथमा चुर्लुम्मै डुबेका छन् । देवकोटाले म्याकबेथको भूमिकामात्र साठी पृष्ठ लेखेका छन् भने उक्त नाटक’bout टिप्पणी ९० पृष्ठ लेखेका छन् र ती पृष्ठहरू फगत फोस्रा पृष्ठ नभएर भरिला र चाखिला विश्लेषणले भरिएका छन् । सर्वप्रथम उनले नाटककार सेक्सपियरको जीवनलाई संक्षिप्त तर सूक्ष्म रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् । देवकोटाले सेक्सपियरको जन्म–दर्तामितिदेखि मृत्यु र अन्त्यष्टि तिथिसम्म (सन् १५६४, २६अप्रिल—१६१६, २३अप्रिल ) प्रष्ट भाषामा उल्लेख गरेका छन् । सेक्सपियरले आफ्नो जीवनको महŒवपूर्ण कार्यहरू कुन परिवेशमा कसरी सम्पन्न गरेका थिए भन्ने कुरो पनि उनले राम्ररी उल्लेख गरेका छन् । देवकोटाले लेखेका छन्—सेक्सपियरले सुरुसुरुमा दुःखको बेला नाट््यशालाबाहिर राखिएका अतिथिका घोडाहरूको रेखदेख गर्ने काम समेत गरेका थिए र पछि गएर मात्र उनले राम्रा नाटककम्पनीको सदस्य बन्ने मौका पाएका थिए । भनिन्छ— उनले नाटकमा अभिनयसमेत गरेका थिए । सेक्सपियरले ह्याम्लेटमा भूतको र आयज यू लाइक इटमा आदम नाम गरेको बृद्ध नोकरको भूमिका खेलेका थिए भन्ने अनुश्रुति पाइन्छ । महारानी एलिजावेथका समक्ष ग्रिनविच दरबारमा त्यसबखतका प्रमुख अभिनेता विलियम केंप र रिचार्ड वर्वेजका साथमा रही सेक्सपियरले नाटकमा भूमिका खेलेका थिए । यो सोह्रौ शताब्दीको अन्त्यतिरको कुरो हो । त्यसपछि एलिजावेथको मृत्युपछि जेम्स प्रथमको पालामा आइपुग्दा सेक्सपियर अझ लोकप्रीय भएका थिए । राजदरबारका ठूला पर्वहरू सेक्सपियर र उनका जमातविना कस्तोकस्तो खल्लो र अधुरोजस्तो महसुस गरिन्थ्यो । यी सब कुरा देवकोटाको भूमिकामा प्रष्ट पढ्न पाइन्छ ।
देवकोटाले आइज्याक वाल्टन (सन् १५९३—१६८३) को निबन्ध पूराबल्सीवाला मा Gospel लाई धर्मोपाख्यानम भनी अनुवाद गरेका छन् । पुरानो अङ्ग्रेजी godspel बाट ब्युत्पन्न शब्द गोस्पेल को अभिधेय अर्थ ‘असल समाचार’ हो । यिशुख्रिष्टको जीवन, मृत्यु र सन्देश’bout चारजना इभाङ्गेलिस्ट (म्याथु, मार्क ल्युक र जोन)द्वारा लिखित चारवटा धार्मिक पुस्तकहरू नै गोस्पेल्स हुन् । यी चार पुस्तकहरूमध्ये एक पुस्तक गोस्पेल हो । यसरी हेर्दा देवकोटाले गरेका गोस्पेलको अनुवाद धर्मोपाख्यानम स्वाभाविक देखिन्छ, तर यदि यसलाई ख्रिस्तान–धर्मोपाख्यान भनी भाषान्तर गरिन्थ्यो भने गोस्पेलको गूढार्थसँग अझ प्रष्ट रुपमा नजिकिन सकिन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ मलाई । जे होस्, आजभन्दा आधा शताब्दीपूर्व नै देवकोटाले यति गहन अध्ययनपूर्वक धार्मिक शब्दको अनुवाद गरेको पाउँदा त्यसपछिका नेपाली अनुवादकहरूमा गतिरोध पैदा भएको प्रष्टै देखिन्छ । अर्को भाषामा भन्नुपर्दा देवकोटा र देवकोटापछिको पुस्ताबीच गहिरो गर्त देखिन्छ ।
म्याक्बेथ नाटकमा देवकोटा अत्यन्तै गहिराइमा डुबेका छन् भन्ने कुराको उदाहरणहरू यस कृतिभित्र थुप्रै छन् । उनले अंक १ को दृश्य १ ’bout यस्तो टिप्पणी गरेका छन् M ===अन्त्यानुप्रासहरू मन्त्रोच्चारणका मिल्दा ढुङ्गाजस्ता गुञ्जन्छन् । तीन, पाँच, सातजस्ता तान्त्रिक संख्या प्रयोग गरिएका छन् ।’ यसबाट देवकोटामा तान्त्रिक ज्ञान’bout पनि अध्ययन र थियो भन्ने बुझिन्छ ।
अंक १ को दृश्य १ को ९–१० हरफ’bout उल्लेख गर्दै आपूmले गरेको अनुवाद’bout देवकोटाले यस्तो टिप्पणी गरेका छन्— उनले अङ्ग्रेजी मूलको ग्रेम्याल्किन (Graymalkin) शब्दलाई ‘कुइरी बिराली’ भनेर अनुवाद गरेका छन् र त्यसलाई भावार्थ भनेका छन् । देवकोटाको विचारमा नेपाली लोकविश्वासअनुसार पनि बोक्सीका छौंडा बिराला हुने भएकाले त्यसरी अनुवाद गरेका हुन् भनेका छन् । वास्तवमा, ग्रेम्याल्किन शब्द कलिन्स, क्याम्ब्रिज, अक्सफोर्ड र इन्कार्टाजस्ता शब्दकोश र विश्वकोशमा समेत मैले फेला पार्न नसकेको हो । हुनसक्छ— ग्रेम्याल्किन अङ्ग्रेजी शब्द नभएर चार शताब्दीपूर्व सेक्सपियरले भिq\_याएका विविध आगन्तुक शब्दमध्येको कुनै हुनसक्ला र त्यसलाई देवकोटीय दृष्टिले भाषान्तर गरेको हुनसक्छ ।
अंक १ को दृश्य २ ’bout देवकोटाले अङ्ग्रेजी शव्द सार्जन (Sergeant) लाई भावार्थको रुपमा रक्षक भनी अनुवाद गरेका छन् र आफ्नो अनुवाद’bout प्रष्ट पादै लेखेका छन्—“पहिलेपहिले सार्जन शब्दले सामन्ती जङ्गी सेवा गर्ने, जस्तो राजामहाराजाको अङ्गरक्षा गर्नेलाई जनाउँथ्यो । पछिपछि यसको अर्थ परिवर्तन हुन गएको हो ।” देवकोटाको तर्क स्वाभाविकै लाग्छ ।
जोशी. कुमारबहादुर । वि.सं. २०६५। कात्तिक । लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा’bout कृष्णचन्द्रसिंहसँग संवाद, (साहित्यिक मासिक गरिमा )
प्रकाशित : ‘भृकुटी’ समालोचनात्मक एवम् अनुसन्धानात्मक सहित्यिक साँस्कृतिक त्रैमासिक (महाकवि लक्ष्मप्प्रसाद देवकोटा शतवार्षिकी विशेषाङ्क) —पूर्णाङ्क ५
(लेखकको अनुरोध: आदरणीय बौद्धिक मित्रहरू ! यो लेख ‘भृकुटी’ समालोचनात्मक एवम् अनुसन्धानात्मक साहित्यिक साँस्कृतिक त्रैमासिक (महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा शतवार्षिकी विशेषाङ्क) पूर्णाङ्क—५ मा प्रकाशित भएको छ । यो अङ्कको मूल्य बिद्यार्थी र सामान्य आय भएका पाठकहरूको निम्ति महङ्गो हुन सक्ने भएकोले फेसबुकमा पोष्ट गरेको हुँ ! (यो अङ्कको मूल्य ने.रु. ६९५।–; भा.रु. ७९५–) अतः शैक्षिक एवम् बौद्धिक उपयोगको निम्ति यो लेख खुला छ, तर यसलाई सम्पादन गर्ने वा मनलागी प्रयोग गर्ने नैतिक अधिकार कसैलाई पनि छैन|)
फेब 29, 2012 @ 09:52:43
यो लेख ‘विचार–सङ्कलन’मा समावेस गर्नुभएकोमा बी.पी.जीलाई धन्यवाद छ ।